Beads Glass Glass Reflective Embeded in Paint Acrylic China Manufacturer
Description:Vola vita amin'ny glasy nalefa tamin'ny loko Acrylic,Ny microspheres nampidirina tamin'ny loko Acrylic,Pikantsary vita amin'ny jiro fandrefesana nalefa tao amin'ny Paint
Home > Products > Intermix Glass Beads > Beads Glass Glass Reflective Embeded in Paint Acrylic
Kitaposehana vita amin'ny miora na mikrofera nopetahana amin'ny pentina dia manome sehatra mahavelona
Ahoana ny fomba fanamafisana ny Paint amin'ny Colore Acrylic Paint sy ny kirany fitaratra jiro?
Fanolorana fampahafantarana mampiseho ohatra momba ny fomba sy ny fampiasana ny loko. Ny labiera Chiye Glass dia manamboatra loko mamirapiratra.
Kitapo mason-tsivana mitsivalana ho an'ny marika fanenoman-damba
Ny mari-pamantarana goavana sy ny lalamby dia mampiasa karazana loko sy fitaovana manokana. Ny ankabeazan'ny loko marevaka sy ny fitaovana fametrahana marika hafa (PMM) dia misy perla-jiro an'arivony lavitrisa metatra eo ho eo izay mifatotra amin'ny làlambe miaraka amin'ny bindery mafy. Raha tokony hanaparitaka ny hazavana, toy ny loko voajanahary, ny loko mibontsina izay misy perla glass dia manodina ny hazavana ary mamerina izany amin'ny làlana ifantohanao. Ny sary 1 dia maneho ny fomba fitaratra fitaratra.
Ho an'ny kôlôjia mba hamerenana ny hazavana, dia ilaina ny toetra roa: mangarahara ary ny manodidina. Kitapo vita amin'ny fitaratra dia samy manana ireo toetra ireo. Ny fangatahana fangaraharana sy ny fihenanam-po dia azo raisina ho manan-danja raha manaraka ny làlan'ny hazavana ianao rehefa miditra ao amin'ny kofehy voarakitra anaty marika fampiharana. Tsy maintsy mangarahara ny jiro fitaratra mba hahafahan'ny fahazavana miditra sy ivelan'ny sehatra. Rehefa miditra ao amin'ny kofehy ny ranjon'ilay hazavana, dia atambatra ny elanelany amin'ny rindrina eo amin'ny teboka etsy ambany, izay napetraka ao amin'ny loko na PMM. Ny hazavana mamely ny ambim-bavon'ny loko boribory dia hita taratra amin'ny loko, amin'ny ampahany kely amin'ny hazavana miverina mankany amin'ny loharano manaitra.
Ahoana ny fampiasana vatomamy vita amin'ny gorodona amin'ny fitaovana famantaran-dalavaly
Ireo kofehy fitaratra dia ampiharina amin'ny fametrahana fitaovana marika amin'ny iray amin'ireo fomba telo. Azo alaina amin'ny alàlan'ny fanoratana ireo fitaovana izy ireo alohan'ny fampiharana, na mety halefany na hiparitaka ao anaty loko mavo mivantana mivantana eo ambadiky ny lakaoly ny loko, na ny ampahany dia azo apetraka eo amin'ny foibe fantsom-bokatra roa na sasany amin'ny plastika.
Ny endrik'olona lehibe indrindra dia mihodina amin'ny loko, miaraka amin'ny fihetsika fanosihosena ny loko miposaka any amin'ny tendrontany boribory. Manome hetsika roa izany. Izy io dia manidy ny gorodona ao anaty loko ary mamela ny loko hanao zavatra ho toy ny faritra mirongatra mirongatra ho an'ny fiterahana indray, miaraka amin'ny lokon'ny loko izay manimba ny lokon'ny hazavana mibaribary. Ny hazavana niditra tao amin'ny fitaratra dia navilivana ary nifantoka tamin'ny atodin'ny kofehy ary nitodika tany amin'ny lamandy sy ny mpamily.
Ny fampiharana tsara ny kavina dia miteraka ao amin'ny glossy ambony vita amin'ny fitaratra vita amin'ny vera. Tsy maintsy misy kalitao vita amin'ny kofehy vita amin'ny vera sy ny loko mba ahafahan'ny loko sy ny fandrakofana ny ravina hanatsara ny fikajiana amin'ny alàlan'ny fitateram-bahoaka. Vokatry ny loko madinidinika amin'ny kilaoty ambany. Izany dia miteraka vatomamy mamoritra tsy mety mipoitra, izay hipoitra aloha, ary dia toy izany dia tsy ho fitaovana mahasalama mahomby. Ireo kofehy midangana dia miteraka ampahany betsaka amin'ny hazavana izay miditra amin'izy ireo hivoaka ny lamosina. Vokatry ny loko maromaro ny kiraro efa nipoitra. Raha mbola mitoetra ao anaty fatorana ny kilaoty matevina dia tsy afaka miditra azy ireo ny hazavana ary tsy hisy intsony ny fiterahana.
Ny hazavana azo avy amin'ny rakotra glasa dia singa telo
Index of refraction of glass beads
Ny endriky ny kofehy, ny haben'izy ireo ary ny endriny
Ny isan'ireo kavina ankehitriny ary miharihary amin'ny taratra hazavana
Ny endriky ny refractive indraindray (RI) dia singa manan-danja ara-batana. Ny avo indrindra amin'ny RI amin'ny kofehy ary ny loto marevaka ao amin'ny glasy, ny vidiny kokoa dia ny famokarana. Ny RI dia asan'ny singa simika amin'ny vakana. Ny avo kokoa ny RI, ny fahazavana bebe kokoa dia navadika. Ny pila ampiasaina amin'ny lamin'ny fifamoivoizana matetika dia manana RI amin'ny 1.5. Misy 1,65 RI 5 kilaometatra ampiasaina amin'ny thermoplastics, ary indraindray 1.9 RI maromaro no ampiasaina amin'ny marika afovoan-dàlana. Na eo aza ny fahazavana mihamitombo miaraka amin'ny mari-pamokarana avo lenta kokoa, ny ankamaroan'ny masoivohom-panjakana sy ny eo an-toerana dia mahita fa sarotra kokoa ny mampiasa paoma 1.5 RI.
Ny kofehy vita amin'ny ravin-tsavony dia maherin'ny 60 micrometers (0.0024 inches) mankany 850 mikrometatra (0,034 metatra). Ny haben'ny volomborona dia matetika aseho amin'ny endriky ny sevateur amerikana, na ny habetsaky ny efijery mena izay handehanan'ny jiro. Ohatra, ny US Sieve N ° 20 dia ahafahan'ireo kofehy manana farafahakeliny 840 mikrometatra (0.033 metatra) na latsaka kely mivezivezy amin'ny mesh, fa ny mena 200 isaky ny mamela fotsiny ireo kofehy misy 74 micrometers (0.0029 inches) na latsaka tsy handalo . Ny fampihetseham-poko amin'ny kiraro lava dia mampiasa 20 ka hatramin'ny 100 mesh. Ny endriky ny voatabia amin'ny haben'ny paompy (antsoina hoe endriky ny fizotry ny orinasa) dia matetika ny fanapaha-kevitra politika eo an-toerana mifototra amin'ny antony maromaro.
Ny tsy fahazoana antoka amin'ny fifehezana ara-materialy: misy hatrany dia mielanelana amin'ny habetsaky ny kiraro amin'ny famokarana famokarana
Ny fotoana fanadiovana ny fitaovana fametrahana (mametraka ny fametrahana ny kavina ao amin'ny fatorana): ny fizarana ny habe dia manome antoka fa ny sasany amin'ireo kavina dia hanana fifandraisana faran'izay tsara amin'ny fitaovana marika
Tsy fantatra mazava ny fanaraha-maso ny toetr'andro: ny antony iray hafa mahakasika ny fotoana mahamaina
Fepetra takina amin'ny fiainana an-davan'andro: rehefa mihamatroka ny marika fametrahana, dia hitombo ny kavina izay lalina loatra ao anatin'ilay binditra.
Ny isan'ireo kilaoty nampiharina: ny fitambaran'ny habeny dia mampitombo ny fandrakofana azo atao.
Intermix (Premix) Vorona Glass for Highway Markings Contact Now
Premix Glass Microspheres ho an'ny fiarovana ny arabe Contact Now
Fonosana kilaometatra / thermoplastic Premix BS6088A Glass Beads Contact Now
Vola vita amin'ny glasy nalefa tamin'ny loko Acrylic Ny microspheres nampidirina tamin'ny loko Acrylic Pikantsary vita amin'ny jiro fandrefesana nalefa tao amin'ny Paint Vola vita amin'ny glasy ho an'ny toetry ny alina Vola vita amin'ny glasy ho an'ny famelomana ny Media Vola vita amin'ny glasy ho an'ny milina fandosirana Bevelina vita amin'ny rongony vita amin'ny hoditra Porofo matevina vita amin'ny ravin-taratasy vita amin'ny loko